Abaningi basakhumbula kwamaSoviet Smokehouse eyenziwe amabhakede, imiphongolo noma ashiselwe kusuka eshidini bhokisi lensimbi. Yiqiniso, ngaleso sikhathi kungenzeka ukuthenga anamagama Smokehouse mini, kodwa njengoba abantu abaningi imali akwanele, bese usesha indlela yokuphuma isimo, inkosi ngokurhaba. Namuhla, i-choice amafemu smokehouses, isayizi, simo kanye nezinye kumane omkhulu, kodwa namanje abantu abaningi bakhetha ukwenza bebodwa.
Ikhaya Smokehouse izandla siqu esakhiwe sasivumela kalula. Ngenxa yalesi kubalulekile amba umsele labantu abangu-30 cm ukujula ezincane kanye nobude 2 m kanye ububanzi mayelana 50 cm, it izosebenza ustroystvva flue. Izindonga kudingeka ubeke izitini ukwenza nokubeka isixazululo ubumba emphethweni. Uthayela konke okudingayo ukuze amboze.
Ukubhema ekamelweni ukwenza usayizi umxhwele ngokukhethekile, njengoba ikhaya Smokehouse kufanele anakekele imikhiqizo usayizi ezahlukene, izingcezu ezincane hhayi kuphela inhlanzi noma inyama. Usayizi elilungile -. Indawo elilodwa isikwele ukuphakama 1.5 m Smokehouse akusho ukuthi senze izitini, ungasebenzisa umgqomo evamile, okuhamba phambili kwe- insimbi engagqwali. Ngefasitele kumele ungene ngemvume ku-ikhamera nganoma 20 cm.
Ukuze izinsimbi firebox khetha yensimbi ishidi 3 mm obukhulu. Kufanele babe izinhlangothi ezilandelayo: Ukuphakama - 30 cm ububanzi - 35 cm, ubude - 40 cm Namathisela-ke kusukela ohlangothini reverse ngefasitele .. Kuyadingeka ukwenza umgodi ububanzi ka-15 cm, adingekayo uxhumano lwe-flue futhi emoyeni. Smokehouse ekhaya kumele abe ekamelweni elula. Ngaphakathi udinga ukulungisa izinduku, igridi noma izingwegwe, incike umkhiqizo ukuba ngabhema.
Akunakusetshenziswa abakwazi ukusheshe inqubo ukupheka ngenxa yaleli ukunambitheka izinga izitsha, encishisiwe eshalofini yokuphila akho angase aphazamiseke. Ikhaya Smokehouse akakubekezeleli washesha, akudingeki bese aphonse esithandweni somlilo ukhuni noma abheke ngaphakathi ikhamera, ngesikhathi ukudla ngeke uthole ezinobuthi. Ukuze imikhiqizo ukuvikelwa wanezela kusukela umlotha, sebengakwazi ukudonsa burlap ezimanzi.
Njengoba chips kungenzeka iyiphi imithi, ngaphandle AmaConifers, ngoba aqukethe resin kakhulu, okuyinto bonakalise izinga ukunambitheka umkhiqizo. Futhi akusho ubuhlungu ukususa amagxolo, ngoba iqukethe resin, ikakhulukazi maqondana Birch. Avid Smokehouse chips engcono ukuqaphela zokhuni futhi Alder, yize ungasebenzisa amagatsha emithi izithelo, etholwe ngesikhathi izihlahla entwasahlobo. Ikhaya Smokehouse ikuvumela ukuba ulinge, ngoba izinhlobo ezahlukene ukhuni ukunikeza ukunambitheka ekhethekile.
Izinkuni badinga Chop ezinhle, ukuze uthole izwibela-2 -. 3 cm I chips kufanele abeke flat phansi obhemayo, ngaphambi sigcwalisa kutuswa kancane moisten. Uma ikhaya Smokehouse encane, kuba impela okwanele, kanye nedlanzana chips.
Ukwakhiwa Smokehouse - isixazululo inzuzo kakhulu nababonelelayo, ngoba ungagcina kakhulu ku ukuthengwa ezihlukahlukene ngibhema futhi pamper ngokwabo kanye nemindeni yabo ukudla okunempilo futhi esihlwabusayo ngasiphi isikhathi sonyaka. Ukuvuvukala kungaba konke: inhlanzi, inyama, yenkukhu, imifino, kanye noshizi. ukudla izitsha Homemade tastier okuningi kusuka esitolo, futhi inqubo ukubhema kuletha kumnandi.